Isixhosa ulwimi zonyango isikhokelo kuba langaphandle doctors - Ividiyo incoko ye-Italy
Ukhathalelo isixhosa ngu alungiselelwe foreigners, doctors abakhoyo sele isebenza kwi-Swedish inkathalelo indlela okanye ukukhangela umsebenziIcandelo kanjalo devoted ukuba amayeza, ulwimi, exercises, inkcazo ye ilizwi ukumiselwa kwebandla, kwaye uninzi ngokufanayo izifinyezo. Ukhathalelo isixhosa iqulathe a brochure kwaye i-analyzed isampuli le dialogue phakathi doctor kunye nomonde. Imibulelo yayo isebenziseke pocket ifomati kwaye systematic uphengululo, incwadi ithathe yalo ndawo lakarrocke.
Umbhali Teresa Werner wenziwe lecturing e ezahlukeneyo isiswedish ulwimi izifundo kuba langaphandle doctors, dentists kwaye veterinarians iminyaka eliqela. News!!! Ukongeza, kukho i -"isingesi dentist"- a guide kuba foreigners ukusuka dentists Ulwazi oluninzi malunga ne odontological gerbst waba ipapashwe kwi-zonyango lwezilwanyana-kubhekiswa ncwadi kuba langaphandle veterinarians.
школа в Швеції для мігрантів, освіта дорослих у Швеції
ividiyo incoko couples ezimbalwa ividiyo Dating Dating ngaphandle ubhaliso kunye iifoto i-intanethi Dating ividiyo Dating kunye kubekho inkqubela incoko ngaphandle ubhaliso zephondo Dating ividiyo abafazi i-intanethi ividiyo incoko amagumbi Dating iwebhusayithi ividiyo Dating incoko ngaphandle ividiyo watshata umfazi ukuhlangabezana ads